Ity foto-kevitra iOS 16 ity dia mampiditra foibe fanaraha-maso vaovao sy widgets interactive | iPhone News
Ity foto-kevitra iOS 16 ity dia mampiditra foibe fanaraha-maso vaovao sy widget interactive
Roa herinandro monja sisa no hanombohan'ny WWDC22. Amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika ny rafitra fiasan'ny paoma vaovao efa nandrasana hatry ny ela izay noresahina nandritra ny volana maro. Ny iOS 16 dia mikasa ny hanohy amin'ny endriny tsy azo hozongozonina mandritra ny taona maromaro, saingy manolo-tena ny hampiditra fanavaozana miasa sy rafitra fampahafantarana nohatsaraina. Miaraka amin'ireo lesoka rehetra sy ny fisehoan-javatra sasany dia namoaka lahatsoratra iray i Nicholas Giho Hevitra iOS 16 mampiseho efijery hidin-trano azo zahana, widget interactive ary foibe fanaraha-maso vaovao, ao anatin'ireo zava-baovao maro hafa izay lazainay eto ambany.
Hevitra aorian'ny hevitra, alaintsika sary an-tsaina hoe inona no vaovao ao amin'ny iOS 16
Alohan'ny hanombohan'ny famakafakana ny foto-kevitra, tsy maintsy hamafisina fa iray amin'ireo tsara indrindra navoaka hatramin'izao. Ny fampidirana amin'ny iPhone mockups dia tena nahomby ary ireo endri-javatra nampidirina dia miasa tanteraka. Mampalahelo fa tsy hanolotra ny vaovao rehetra i Apple, hahomby izany.
Manomboka amin'ny hatrany, endri-javatra efa nalaza hatry ny ela. Ity endri-javatra eo amin'ny efijery lalandava ity dia hamela ny iPhone hanana ny efijery foana fa manjavozavo rehefa mihidy ny iPhone. Amin'izany fomba izany dia afaka miditra amin'ny fampahalalana tsy mila ny efijery hirehitra tanteraka. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny fahaizana amboary ny hitsin-dàlana amin'ny fampiharana sasany avy amin'ny efijery hidin-trano miaraka amin'ireo kisary eo amin'ny farany ambany.
Manohy a fanavaozana ny kisary iOS 16 rehetra amin'ny fomba macOS madio indrindra. Ankoatra izany, ny fahafahana manampy ny App Library ao amin'ny dock ny iOS. Ny iray amin'ireo zava-baovao antenainay ho an'ny iOS 16 (ary mino izahay fa hanana izany amin'ny dikan-teny farany an'ny Apple) Widget interactive, singa hita eo amin'ny efijery hidin-trano izay ahafahantsika mifandray. Ohatra amin'izy ireo: fifandraisana amin'ny playback, miaraka amin'ny fampiharana ara-pahasalamana sy ny maro hafa.
Anisan'izany koa ny a foibe fanaraha-maso vaovao manafoana ny 1 × 1 grids, manokatra ny fahafahana mampiditra singa samihafa amin'ny habe samihafa toy ny famirapiratana amin'ny 4 × 1. Ity foibe fanaraha-maso ity dia mitovy amin'ilay ao amin'ny macOS, jereo dia ho hitanao. Farany, fanovana kely telo no ampidirina, toy ny fahafahana manakana ny fampiharana sasany, ny fampandrenesana tsy dia manelingelina loatra fa lany ny bateria, ary ny fomba fitadidian'ny kajy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 16 » Ity foto-kevitra iOS 16 ity dia mampiditra foibe fanaraha-maso vaovao sy widget interactive
Sebastian Vettel manenjika amin'ny scooter ilay mpangalatra nangalatra ny AirPods noho ny fampiharana "Search"
Very ny Apple Watch tao amin'ny Disney World izy ary nandoa $ 40.000 tamin'ny karatrany